Akhriso;-Tobanka Arday ee ugu saraysa Imtixaanka Shahaadiga ah ee Dugsiyada sare Soomaaliya. | Radio Gaalkacyo 88.2 FM
Akhriso;-Tobanka Arday ee ugu saraysa Imtixaanka Shahaadiga ah ee Dugsiyada sare Soomaaliya.
Radio Galkacyo;-Wasiirka Wasaarada Waxbarashada Hidaha iyo Taclinta Sare ee Soomaaliya Mudane C/raxmaan Daahir Cusmaan oo shir jaraa’id caawa ku qabtey Magaalada Muqdisho ee caasumada soomaaliya ayaa ku dhawaaqay Tobanka arday ee ugu saraysa Imtixaanka Shaaadiga ah ee Dugsiyada sare dalka Sanad dugsiyeedka 2017-2018.
Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya, ayaa sheegay in Sanadkaan Imtixaanka Shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka in ay u fariisteen 25,675 oo isugu jira 16,552 Wiil iyo 9,123 Gabdhood, isaggoo xusay in tirada Imtixaanka ka gudubtay ay tahay 20,030 Arday.
Waxa kale oo wasiirku uu sheegay in Imtixaanka lagu qabtey 92 Xarumood oo ku yaala magaalada Muqdisho iyo Goballada Dalka,waxa uuna u mahad celiyey intii ka qayb qaadatay qabsoomida imtixaankaas.
Dhanka kale Wasiirka Waxbarashada, Hiddaha iyo tacliinta sare ee Xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane C/raxmaan Daahir Cusmaan oo la hadlay Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee SONNA, ayaa sheegay in Jaamacadaha dalka ay door weyn ka qaateen Horumarka Waxbarashada dalka, islamarkaana ay socoto Nidaamkii lagu qiimeynayey, waxaana uu intaasi ku daray in hadalkiisa ahaa aqoonsiga Jaamacadaha si qaldan loo turjumar si qaldan.